Mila fanamboarana ny angona data na tsy rakitra Database
Home > Products > DataNumen Access Repair > Mila amboarina ny tahiry 'filename.mdb' na tsy rakitra rakitra.
Fampahalalana amin'ny antsipiriany momba ny "Database mila fanamboarana na tsy rakitra Database" Error
Rehefa mampiasa Microsoft Access hanokatra fisie rakitra database tsy simba dia hitanao aloha ity hafatra diso ity:
Ianao na mpampiasa iray hafa dia mety efa nandao ny Microsoft Office Access tsy nampoizina raha nisokatra ny base data Microsoft Office Access.
Tianao ve ny Microsoft Office Access hanandrana manamboatra ny tahiry?
izay 'filename.mdb' no anaran'ny fisie MDB Access hisokatra.
Azonao atao ny manindry ny bokotra "Eny" hamela ny Access hanamboatra ny angon-drakitra. Raha tsy mahavita manamboatra ny angon-drakitra maloto ny Microsoft Office Access dia hampiseho ity hafatra diso ity:
Fomba fisoratana anarana tsy fantatra 'filename.mdb'
Ary azonao atao ny manindry ny bokotra "OK" ary mahita hafatra fahadisoana fahatelo:
Ny tahiry 'filename.mdb' dia tsy azo amboarina na tsy rakitra rakitra Microsoft Office Access.
izay midika fa ny Microsoft Office Access dia nanandrana ny tsara indrindra vitany saingy mbola tsy afaka manamboatra ilay fisie.
Fahadisoana Microsoft Jet sy DAO tsy azo tratrarina ity ary 2239 ny kaody hadisoana.
Ity lesoka ity dia midika fa ny maotera Access Jet dia afaka mamantatra ireo rafitra fototra sy famaritana manan-danja amin'ny angon-drakitra MDB, saingy mahita kolikoly vitsivitsy amin'ny famaritana latabatra na angon-drakitra.
Hanandrana manamboatra ny kolikoly ny Microsoft Access. Raha tsy azo amboarina ny famaritana ny latabatra izay ilaina amin'ny tahiry manontolo dia hampiseho ilay “Format Databés tsy fantatra” avereno indray ary esory ny hetsika misokatra.
Ohatra ny rakitra MDB maloto izay hiteraka ny lesoka. mydb_2.mdb
Ny rakitra dia namboarina tamin'ny DataNumen Access Repair: mydb_2_fixed.mdb (Ny latabatra 'Recovered_Table2' ao amin'ilay fisie namboarina mifanaraka amin'ny latabatra 'Staff' ao amin'ilay rakitra tsy simba)